China wathungela isigqoko Ukwakha futhi Factory | Yiwu Shunshui
Uma uhlala endaweni ebandayo, akungabazeki ukuthi amabhontshisi noma izigqoko ezilukiwe ziyingxenye ebalulekile yezingubo zakho zasebusika. Kepha noma ngabe ufuna ukufaka isigqoko esifudumele noma ukufaka umqondo wemfashini, kulo nyaka (kanye neminyaka embalwa edlule) kubonakala ngathi uthwele isigqoko. ICarhartt Men's Acrylic Watch Cap iyi-classic beanie, etholakala ngemibala ehlukahlukene, futhi ibiza u- $ 15 ku-Amazon.
Isigqoko uqobo senziwe nge-rib-knit elula i-acrylic, efudumele futhi eguquguqukayo ngaphandle kokulunywa. Ungakhetha kusuka kwimibala namaphethini angama-23 ku-Amazon, kusuka kwimpunga engathathi hlangothi kuya ku-neon orange, ngayinye enophawu lomkhiqizo. ICarhartt iwumkhiqizo onomlando omude, owaziwa ngezingubo zomsebenzi, kepha eminyakeni yamuva nje, isitayela sayo sokwenza izinto ngendlela efanelekile sesisabalele. Kusukela kumajakhethi awukotini aminyene kakhudlwana kuya ezingutsheni zokusebenza, izingubo eziqinile zomkhiqizo, ezinzima bekulokhu kuyintandokazi yabantu abanemfashini iminyaka eminingana. Umkhiqizo uze uhambisane nezitayela zawo zemfashini, usebenzisana nemikhiqizo efana ne-APC ne-Awake NY ukukhiqiza amaqoqo athengisiwe.
Abathengi be-Amazon bahlambalaza ngale beanie, bayinikeza izibuyekezo ezingaphezu kwezingu-7 700 zezinkanyezi ezinhlanu. “Endleleni yokubeka izigqoko noma ubhontshisi, uhlobo lweCarhartt luyisinqumo esihle. Ishibhile, kepha yakhiwe kahle futhi igcina ukwakheka kwayo. Akuhlukani njengamabhontshisi amaningi ashibhile. Njengamanje kunezine zalezi (ezimnyama, ezinsundu ngokukhanyayo, ezinsundu ngokumnyama noHeather grey), futhi zonke zigcina umbala wazo, ukuma kwazo nemfudumalo ngaphandle kwezinkinga. ” Omunye ophawulile wabhala.
Omunye umthengi ubalule ngokukhethekile ukuthi isigqoko sifike kahle ohambweni lwakamuva. “Imibala evelele ingenza ngizizwe ngifudumele e-Iceland, kusukela ekuqombola izintaba emaweni anomoya kuya emihumeni yeqhwa, nasekuzingeleni izibani ezisenyakatho ebusuku. Isizathu sokuthi kungani iba yi-beanie yami ukunethezeka nokusika kwayo. Isikhumba sami siyazwela. , Ayilungele uboya-buthambile futhi bukhululekile. Ihlala yomile ngaphansi kwesifutho samanzi. ”